स्वर्ग पुगेको महसुस हुने शारिरीक सम्बन्धमा तपाईले कहिलै यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/स्वर्ग पुगेको महसुस हुने शारिरीक सम्बन्धमा तपाईले कहिलै यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ?
यो पोजिशन स्नानको तल बाथटबमा अपनाउन सकिन्छ । यो पोजिशन
मा, महिलाको एक खुट्टा जमीनमा हुन्छ भने अर्को खुट्टा बाथटब माथि हुन्छ । महिला थोरै अगाडि झुक्नुपर्छ, ताकि सजिलै अगाडि वा पछाडि बाट सबैकुरा पूरा गर्न सकिओस् । जे होस्, त्यहाँ पोजिशनमा चिप्लेर लड्ने डर हुन्छ । त्यसैले केहि सावधानी अपनाउनु पर्छ।